Puntland: Labo Qof Oo Is Dishey Kadib Markii Ay Ku Cayrtoobeen Abaaraha – Goobjoog News
Puntland: Labo Qof Oo Is Dishey Kadib Markii Ay Ku Cayrtoobeen Abaaraha
Deegaannada Puntland ayaa lagu soo waramayaa in ay isku dilaan Labo qof oo la sheegay in ay is madax mareen kadib markii ay ku xoolo beeleyn abaarta baahsan ee dalka ka jirta.
Suldaan Cabdiqani Qorane oo kamid ah waxgaradka Puntland oo u waramay Goobjoog News ayaa sheegay in deegaannada Burtinle iyo Salax ee Puntland ay isku dileen Labo nin kadib markii ay ka dhammaadeen xoolaha.
Sidoo kale Suldaanka ayaa sheegay in dadka qaar ay u dhinteen cudurro qaarkood dawo loo heli karay, isaga oo sheegay in xitaa weli laga cabsanayo in dadka qaar ay abaarta usii dhammaadaan.
“Muddo 10 beri dhexdooda ah waxaa dhintay dhowr qof oo dhallinyaro u badan, waxayna sababtu tahay cudurro abaartu reebtay, sidoo kale deegaannada Burtinle iyo Salax ee Puntland waxaa isku dilay Labo nin oo markii xoolihii ka dhammaadeen is madax maray, dhibaato badan baa jirta, dalkuna wuu ka wada simanyahay, dadka qaar waxay u dhinteen cudrro dawadooda la heli karo” ayuu yuri Suldaanka.
Dalka waxaa ka jirta abaar baahsan oo sameyn ku yeelatay dadka iyo duunyada, waxaana meelaha qaar jirta dad u geeriyoodey abaartaasi.
Ciidamada Itoobiya Oo Xiray Shaqaale Ka Tirsan Wasaaradda Caafimaadka Somaliland